SAMULAŞ’a Ek 20 Milyon TL Sermaye Artışı Komisyondan Geçti | RayHaber | Wadada Tareenka | Wadada weyn | cable baabuur
HomeTURKEYGobolka Banaadir55 SamsunKordhinta 20 Milyan ee TL ee Kordhinta ah ee SAMULAŞ Gudbiyey Guddigu
12 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 55 Samsun, tareenka, GUUD, Gobolka Banaadir, KENTİÇİ Systems Rail, HAY'ADAHA, Headline, Samulaş, TURKEY, taraamka 0
samulasa milyan oo dheeraad ah oo TL ah oo korodh ah oo komishanka ah
Kulan ay Yeeshay Gudiga Mashruuca Dawlada Hoose ee Magalada Samsun Mashruuca Gaadiidka Mashruuca Dowlada Hoose polmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş. (SAMULAŞ) 20 milyan TL soojeedin codsi raashiin oo dheeraad ah ayaa lagu aqbalay cod aqlabiyad ah waxaana loo gudbiyey baarlamaanka.
Shirka Guddiga Dawladaha Hoose ee Magaalada waxaa qabtay gudoomiye Nihat Soğuk, gudoomiye kuxigeenka Golaha. Waxyaabihii baarlamaanka looga wareejiyay guddiyada waxaa kala dooday xubnaha guddiga. Maqaalka ugu horeeya Golaha “'Samsun Metropolitan District 2020-2024 Qorshaha Istiraatiijiga Sanadlaha ah' Xoghayaha Guud ee Dawlada Hoose ee Metrounti Ilhan Bayram ayaa soo bandhigtay warbixin dheer oo kusaabsan qorshaha istiraatiijiyadeed, Samsun waxay ka shaqeyn doontaa sidii loo gaadhsiin lahaa heerka la doonayo, ayuu yidhi.
20 milyan oo dheeraad ah oo TL ah ayaa ku soo dhaca SAMULAŞ
Gudiga 2. Qodobka ajendaha ayaa ahaa teklif Soo jeedinta ah in lagu kordhiyo caasimada hadda ee SAMULAŞ laga bilaabo 50 milyan TL ilaa 20 milyan TL oo leh '70 milyan oo dheeraad ah'. Maqaalka, halkaas oo in ka badan 1 lagaga hadlay, dhammaan kooxaha ayaa hadlay oo muujiyey fikradahooda.
Enver Sedat Tamgacı, Maareeyaha guud ee SAMULAŞ, wuxuu sheegay inay rabaan inay kordhiyaan raasamaal. Iyada oo la furay iskuulada maalmaha shaqada, tiradan ayaa korodhay 53. 75 milyan 1 bishii macnaheedu waa in kun qof ay guureen. Boqolkiiba 620 ee rakaabkani waa tigidhada buuxa, boqolkiiba boqol hoos udhaca 45, boqolkiiba boqol dhimis dheeraad ah 30 rakaabyada aan qaadno sharci ahaan bilaash ah, boqolkiiba 6,5 rakaabkeenna waxay wataan kaarka magnetic ultralite magnetic. Ku dhawaad ​​bil kasta, taraamku wuxuu leeyahay qiime koronto oo ah 15 kun TL. Waxaan leenahay isticmaalka korantada 3 TL halkii kiilomitir. Dakhligayaga billaha waa 750 milyan TL kharashkeenna waa 3 milyan 3 kun TL. Baska, waxaan wadnaa qiyaastii 3 kun oo rakaab ah maalintii. Boqolkiiba 800 ee tani waa lacag la'aan, boqolkiiba boqol ayaa hoos udhaca rakaabka. Waxaan sidnaa 25 kun oo rakaab ah bil kasta. Bil kasta waxaan leenahay 10 milyan 15 kun oo TL kharashyada shidaalka. Tani waxay u dhigantaa 750 TL halkii km. Kharashaadka dusha sare sida shaqaalaha iyo alaabada firaaqada ayaa kor saaran iyaga. Dakhliga billaha ah ee laga soo qaado basaska waa 1 milyan 200 kun oo TL, kharashka billahana waa ku dhawaad ​​3 milyan 1 kun TL. Taasi waxay tidhi, qiyaastii 150 kun ayaa dhaawac ah bil kasta.
“Dakhliga sanadkii waa 31 milyan kharashkiisuna waa 33,5 milyan”
Tamgacı sidoo kale waxay bixisay macluumaad ku saabsan deyntii SAMULAŞ sanadkii hore iyo xaalada dhaqaale ee mustaqbalka. Kharashaadka sanadlaha ah ayaa ka badan TL 2017 milyan. 31, kaliya 33,5 milyan TL ayaa ku dhaawacantay taraamka. Sababaha taas waxaa ka mid ah xaqiiqda ah in aan wax kororsi ah la sameynin tan iyo 2017, waxaana jira koror koronto iyo shidaal. Loogu talagalay giraan iyo rakaab sharaxan, qiyaastii 3 milyan TL ayaa la dhaawacay. 2016 kun TL ayaa laga lumiyay Wargeys Tramvay. 3,5, 750 wuxuu lahaa luminta korodhka ku dhowaad TL milyan marka loo eego 2018. 2017 dhexdeeda, Tramvay Gazetesi sidoo kale wuxuu lahaa kharash ah 6 kun TL. 2018, waxaan saadaalinay khasaaraha 850 million TL. 2019, SAMULAŞ wuxuu iibsaday taraamyada 30 ee leh qaabkiisa. Tan darteed, ku dhawaad ​​2017 milyan oo dhibcood oo deyn ah ayaa laga noqday oo lacagihii la bixiyay. Tani waxay sidoo kale leedahay kharashyo maaliyadeed ”.
Isaga oo tixraacaya kororka raasamaal ee shirkadaha gaadiidka ee gobollada kale, Tamgacı wuxuu yiri: X Haddii aad rabto inaad macaash ka sameyso gaadiid, waxaa jira arrinta 2-3. 1 waxaa lagu sameeyaa kor u qaadis. Tani ma aha wax si weyn loo qadariyo. Gaadiidka sidoo kale waa mid kamid ah adeegyadeena ugu waaweyn, sida wadada iyo biyaha. Intaas waxaa sii dheer, degmooyinka ayaa taageera gaadiidka. Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa waxay kordhisay caasimada 2019 million TL ilaa 240 kaligeed sanadka. Kayseri Metropolitan Municipal 38,5 million TL, Gaziantep Metropolitan Municipal 15 million TL, Malatya Dawlada Hoose ee 24 million TL ayaa kaliya lagu xoojiyay iyadoo la kordhinaayo caasimada 2019. Waanu sii socon doonnaa xilliyo gaar ah intaas ka dib. Si loo dhammeeyo sanadka 2019 hab caafimaad qaba, waxaan dalbanay in la kordhiyo raasumaalka sanadkaan, laga yaabee rubuc ugu horeysay ee 2020. Waxaan u soo bandhignay mahadnaqaaga. ”
Khudbadii Tamgacı kadib, gudoomiyaasha kooxdu dhamaantood waxay muujiyeen aragtidooda iyo waxa ay ka walwalaan. Markii dambe, soo jeedinta waxaa lagu aqbalay cod aqlabiyad ah waxaana mar labaad loo gudbiyey baarlamaanka.
Haddii qodobka lagu sheegay lagu ansixiyay Golaha Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun, SAMULAŞ waxaa la siin doonaa koror raasamaal oo ah '20 million TL'.